Kaalinta Nabadoon Xaad dhalinyarada loo diray Eritrea | KEYDMEDIA ONLINE
MUQDISHO, Soomaaliya - Guddoomiyaha Gollaha dhaqanka beelaha Hawiye, Maxamed Xasan Xaad ayaa sheegay in uu qeyb ka qaatay qorista dhalinyarada Soomaaliyeed ee la la'yahay, kuwaasoo 2019-2019 tababar qarsoodi ah loogu qaaday dalka Eritrea.
Nabadoonka ayaa sheegay in uusan ka warqabin in dhalinyaradda loo waday dalka Eritrea, loona sheegay in Turkiga lagu soo tababarayo.
Xaad ayaa afkiisa ka xaqiijiyay inuu soo qoray 44 dhalinyaro ah oo beeshiisa kasoo jeedaa, kuwaasoo ay ka dalbatay hay'adda Nabad Sugida, oo dhamaan Beelaha Soomaaliyeed u qeybisay Wiilasha tababarka loo qaaday.
Nabadoonka wuxuu xusay in dhalinyarada uu kusoo xulay sida laga dalbaday aqoontooda, ugu yaraan inuu Dugsiga sare kasoo qalin-jebiyay, oo aan balwad lahayn, islamarkaana yahay qof aan da'diisuna ka wayneyn 30 sano, kuwaasoo taliyaha NISA Fahad Yaasin u qaadey Eritrea, oo illaa hadda kasoo laaban.
Wuxuu Nabadoonka u qoray dhalinyarada in lagu aas-aasayo Nabad Sugida Galmudug, isagoo geeyay liiska magacyadooda iyo sawiradooda, xarunta Nabad Sugida ay dhalinyarada ku qorato ee degmada Shangaani, ee gobolka Banaadir.
Xaad ayaa hadalkan sheegay xili ay sii xoogeysanayso cadaadiska dowladda Farmaajo lagu saarayo inay caddeyso halka ay ku dambeeyaan dhalinyarada maqan, oo lagu qiyaasay inta u dhaxaysa 4,000 illaa 7,000 kuwaasoo warbixin Qaramada Midoobey ay soo saartay lagu sheegay inay ka dagaalameen gobolka Tigray.
Nabadoonka ma uusan xusin inay wiilasha uu qoray uu la socod-siiyay waalidiintooda marka loo qaadayay Eritrea, laakiin wuxuu sheegay in macluumaadka la siiyay marka uu keenaya wiilasha ay ahayd in loo qaadayo dalka Turkiga.
Waalidiinta qaar ayaa loo sheegay in Carruurtooda shaqo loogu qaadayo Qatar, oo Ciyaaraha Koobka Adduunka 2022, ayna kamid noqon doonaan Ciidanka amaanka ilaaliya.
Dhalinyaradan ayaa qaabka dalka looga qaaday ku daboolnaa mugdi badan, waxaana soo ifbaxay inaan la marsiinin hanaanka Ciidanka loo qoro, islamarkaana tababarka loogu qaado dalka dibadda, waxaana howsha ahayd mid shaqsiyaad gaar ah wateen, oo ujeedka gaar ahna la lahaayeen Fahad iyo Farmaajo.